‘Waxaan gabadheyda u helay hab aan uga qosliyo marka ay nagu soo dhacayaan madaafiicda’ | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
ARIMAHA BULSHADA ‘Waxaan gabadheyda u helay hab aan uga qosliyo marka ay nagu soo...
‘Waxaan gabadheyda u helay hab aan uga qosliyo marka ay nagu soo dhacayaan madaafiicda’
“Labo sano ka hor, wakhtigii Ciidda, mar ay carruurta bulaleyr qeylo dheer rideen ayey ka naxday, durbadiiba waxaan usoo bixiyay bannaanka, mid ka mid ah carruurtii ayaana ka codsaday inuu horteeda mid ku qarxiyo. Kaddib wuu dhawaaqay qarixii bulaleyrka carruurtiina way wada qosleen, sidaas awgeed Salwa waxaan u sheegay inaysan ka cabsanin dhawaaqa noocaas”, ayuu Cabdullaahi.
Image captionSalwa hadda waxay ku qososhaa dhawaaqa gantaallada
“Labo maalmood kaddib, diyaarad ayaa madaafiic ku garaacday magaalada, islamarkiiba intaan farxad u muujiyay ayaan u sheegay inaysan ahayn wax laga cabsado, waayo carruurtii ayaa bulaleyrka rideysa”, ayuu yiri.
“Hadda wey weynaatay, wayna fahmeysaa diyaaradaha, gantaallada iyo wixii la midka ahba. Laakiin waxay aragtaa anigoo isxakameynaya oo qoslaya, iyaduna sidoo kale ayey isku xakameysaa, wayna qososhaa.
“Marka aan ogaado inay duqeymo dhici rabaan, waxaan soo qaataa telefoonkeyga, iyadana waan u yeeraa anigoo dhahaya kaalay aan sawirro iyo muuqaallo iska qaadnee. Sheekada oo dhan waxaan u baddalaa ciyaar, si aysan wax cabsi ah u dareemin”, ayuu yiri.
Image captionDagaalka sokeeye ee Suuriya wuxuu barakiciyay malaayiin qoys
Previous articleJubbaland oo go’aan ka qaadatay sharciyo ay ansixiyeen labada gole ee Baarlamanka
Next articleWaa kuma ninka uu Trump u xushay agaasimaha sirdoonka ‘ee lala wada yaabay’?
Barasaabka magaalada Maka oo amar ku bixiyay in lasoo xiro gabar fanaanad ah
Xildhibaan katirsan golaha shacabka oo si kadis ah goor dhow ugu dhintay magaalada Muqdisho kadib markii oo istaagay….
Al-shabaab oo Shaaciyay Magacyada Iyo Qabiilada Ragii Weeraray Hotel Cas-casey ee Kismaayo
Sawirro:Madaxweyne Waare Oo Muqdisho Ka Wada Howl Culus,Halistii Uu Galay & Guusha Uu Gaaray
XOG:Maxeey ka argagaxayn madaxda Ahlu Sunna oo Fahad Yasiin ugu diray magaalada Dhuusamareeb
Qarax Xoogan oo lala Beegsaday Ciidamada DF iyo Khasaaro ka dhashay
Siyaasi Cabdiraxman Cabdishakuur Oo Kahadlay Socdaalka Madaxweyne Macron Sheegayna In……
Villa Somalia oo War Kulul kasoo saartay Sababta UN-ka ay ugu diiday inay Keydka DF baarto
Somalia Oo Kamid Noqotay Dalalka Colaadaha Ka Socdan Ay Caruurta Badan Ku Geeriyooto
Madaxweynaha Hirshabeelle oo eedeeyay Golaha Iskaashiga D/goboleedyadda kuna tilmaamay in…